पर्यटन Archives - KavrePress
आकासियो मूल्यबृद्धि, सर्वसाधारण मारमा, सरकार मौन
बनेपा- पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै होइन दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन । आपूर्तिकर्ता तथा कम्पनीले नै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर पठाएकाले खुद्रामा पनि बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् । एक महिना अघिसम्म ३ सय रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने खाने तेललाई अहिले ४ सय रुपैयाँमा विक्रेताले बेच्ने गरेका छन् । चामल प्रति बोरा ५० देखि १०० रुपैयाँ, दाल लगायत गेडाग...
कृषि मन्त्री बसुन्धरा हुमगाईलाई काभ्रेका किसानको प्रश्न मन्त्री ज्यू मल खै ?
काभ्रेपलान्चोक - जेठ लागेसँगै धान रोपाईंको चटारो बढ्दै जाँदा किसान रासायनिक मल विहिन अवस्थामा पुगेका छन् । आवश्यक रासायनिक मल व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरकारी निकायले नै माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा नभएपछि यस पटक शुरु देखी नै मल अभाव हुन थालेको हो । सरकारले जहिल्यै मुख्य सिजनमै मलमा किसानलाई धोका दियो । काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पनि रासायनिक मलको अभाव देखियको छ । काभ्रेका सबै ठाउँह...
भुम्लुका १० वडामा कहाँ–कसको जित ?
काभ्रे : जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकामा मतगणना सम्पन्न भएको छ । आज सम्पन्न भएको मतगणना अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा गतबन्धनको जित भएको छ । गाउँपालिकामा ५ दलिय गठबन्धन अन्तर्गत अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका प्रेम भुजेल (बृहत) र उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका जितेन्द्र मान तमाङ्ग (दावा) भारी मतले बिजयी भएका छन् । गाउँपालिकामा १० वटा वडा रहेको छ । वटा व...
पाँचखालमा आर्थिक विकासको एमाले मोडल कृषि भूमिमा पानी, सिंचाईमा लगानी
पाँचखाल–सम्भावना प्रशस्तै भए पनि सही नेतृत्वको अभावका काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा आर्थिक उन्नति स्थानीयबासीको सपनाजस्तै बनिसकेको छ । अघिल्लो चुनावमा पाँचखालालाई अमेरिकी मोडलमा विकास गर्ने भाषण सुनेर मख्ख परेका पाँचखालबासी अहिले निराश बनिसकेका छन् । तर, पाँचखालमा दीर्घकालिन आर्थिक विकासको जग बसाउने संकल्पसहित नयाँ नेतृत्वका लागि युवा नेता कञ्चन अधिकारी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ‘जनताले नयाँ...
भुम्लु लाई काभ्रेको नै नमुन पालिका बनाउने छु : प्रेम लामा उम्मेदवार
काभ्रेपलाञ्चोक – भुम्लु गाउँपालिकामा नेकपा एमाललेले चुनावी गतिविधिहरुलाई तिब्रता दिएको छ । गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा घरदैलो अभियानमा पुर्वमन्त्री गोकुल बाँसकोटा सहित र्याली सभा तथा सम्मेलनहरुको आयोजना गर्दै आईरहेको छ । गाउँपालिकामा लोकप्रिय समाजसेवीको रुपमा चिनिएका युवानेता प्रेम लामा यस पटकको स्थानिय निर्वाचनमा भुम्लु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उममेदवार हुन । लामो समय देखी नेकपा एमालेमा सक्रिय रुप...
भुम्लु गाउँपालिकाको अध्यक्ष प्रेम लामा बन्ने पक्का, आखिर को हुन् प्रेम लामा ?
बनेपा - काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकामा निकै लोकप्रिय समाजसेवी इमान्दार र बौद्धिक ब्याक्तित्वका रुपमा परिचित यूवा नेता प्रेम लामा गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । भुम्लु गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका लामा स्थानीय स्तरमा निकै लोकप्रिय समाजसेवीको रुपमा परिचित युवा हुन्। समाज सेवामा अनवरत रुपमा लागेका लामा ०७२ सालको भूकम्प होस् वा कोभिड १९ को जोखिमपू...
बनेपाको समृद्धि र विकासका लागि सामन्तीहरूको पराजय र नेकपा एमालेको विजय अनिवार्य
काभ्रेपलान्चोक - नेकपा एमालेबाट बनेपा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका मेयर पदका उम्मेदवार रत्नकुश रञ्जितकारले अब बनेपाबाट परिवारवाद र सामन्ती शासन सधैका लाथि अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ । आज बनेपा नगरपालिका वडा नं. २ मा आयोजित चुनावी कोणसभालाई सम्बोधन गनुृहुँदै उहाँले बनेपाको संवृद्धि र विकासका लागि सामन्तीहरूको पराजय र नेकपा एमालेको विजय अनिवार्य भएको बताउनुभयो । इतिहासदेखि जनतालाई ...
मंगलबार, बैशाख २०, २०७९
बनेपामा एमालेको चुनावी माहोल : बाजासहित मनोनयन दर्ता ( फोटो फिचर सहित)
काभ्रेपलान्चोक - स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमै छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै जिल्लामा चुनावी माहोल तातिएको छ । जिल्लाका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै बनेपामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले बाजागाँजा सहित नगर परिक्रमा गर्दै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । नगरपालिकाको प्रमुखमा रत्न कुश रंजितकार र उपप्रमुखमा बिमला सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नगर प्रमुख र उ...